Operation Dudula Archives - Isambane News
Tag: Operation Dudula
UNhlanhla Lux noBheki Cele bahlangane ngemuva kokudutshulwa kowesilisa eSoweto
Ungqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele uvakashele eSoweto ngoLwesithathu ngemuva kwesigameko sokudubula ngoMsombuluko esishiye kushone oyedwa kwalimala abane. Abahlali basePimville bebemashele emijondolo…
I-Operation Dudula ihlela ukubungaza ukwethulwa kweKZN ngemashi yangempelasonto eThekwini
UNobhala Jikelele we-Operation Dudula, namalungu esithangamini saKwaZulu-Natal eThekwini ngoLwesibili. Isithombe: Lwazi Hlangu (Sowetan live) I-Operation Dudula isidlulisa umyalezo wayo KwaZulu-Natal.…
UJulius Malema uzichithile izinsolo zokuthi nguyena imbangela yokuboshwa kukaNhlanhla “Lux” Dlamini.
UJulius Malema uzichithile izinsolo zokuthi nguyena imbangela yokuboshwa kukaNhlanhla “Lux” Dlamini. UMHOLI we-EFF uJulius Malema ukuchithile ukuthi nguyena imbangela yokuboshwa…
Bayanda abantu abathathe isinqumo sokuyeka ukuba ngamalungu e-EFF
Bayanda abantu abathathe isinqumo sokuyeka ukuba ngamalungu aleli qembu bajoyina amanye amaqembu abacabanga ukuthi afanele amavoti abo. Muva nje uDJ…
Unikezwe ibheyili ka-R1500 umholi we-Operation Dudula, uMnuz Nhlanhla Lux Dlamini
Umholi we-Operation Dudula uNtlantla Mohlauli, odume ngelikaNhlanhla ‘Lux’ Dlamini, uvele eNkantolo yeMantshi yaseRoodepoort. Umholi we-Operation Dudula uNtlantla “Lux” Mohlauli unikezwe…
UGayton McKenzie uthembisa ukukhipha uNhlanhla Lux ejele ngazo zonke izindlela
Umholi we-Patriotic Alliance PA, uGayton McKenzie, ulandele ngokugcwele uNhlanhla Lux umholi we-Operation Dudula ovalelwe amaphoyisa. Ukuboshwa kukaNhlanhla Lux kususe abantu…
Amaphoyisa amise u-Operation Dudula eKZN
Ukwethulwa komkhankaso i-Operation Dudula KwaZulu-Natal kumiswe amaphoyisa ngeSonto. Kuke kwaba nezimemezelo zokuthi iKwaZulu-Natal izokwethula imikhankaso yayo kule mpelasonto kodwa kwangenzeka.…
Izimemezelo zomphakathi Izindaba
Amaphoyisa ase-KZN aqaphe ngeso lokhozi kulandela ukufakwa kwama-voice notes nemiyalezo esongela udlame olubhekiswe ezitolo eziphethwe abokufika
Osomabhizinisi bakwamanye amazwe baxwayiswe ukuthi bangasebenzi ngeSonto. Amaphoyisa azotshalwa ngobuchule ukuze aphendule ngokushesha kulabo abenza okuphambene nomthetho. Amaphoyisa aKwaZulu-Natal aqaphe…
Ababhikishi be-Operation Dudula babonakale beshisa izikibha ze-EFF
Isimo siya ngokuba sibi nge-Operation Dudula ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa iJohannesburg Central Police Station okuboshelwe kuso umphathi we-Operation Dudula,uNhlanhla Lux,sekuwudumo lwezemidlalo…
Amalungu eOperation Dudula ahlangane namuhla afuna kukhululwe uNhlanhla Lux
Amalungu e-Operation Dudula ayagomela ukuthi azobuyela esiteshini samaphoyisa eJohannesburg Central ukuyofuna ukuthi kukhululwe umholi wawo. UNhlanhla ‘Lux’ Dlamini uboshwe ngoLwesine…
Owayengumphathi weCrime Intelligence uRichard Mdluli ukhishwe ngoshwele